'Mana murtiitti osoo hin dhihaatiin torban lakkaa'amaa jiru' - maatii hidhamtootaa - BBC News Afaan Oromoo
'Mana murtiitti osoo hin dhihaatiin torban lakkaa'amaa jiru' - maatii hidhamtootaa
30 Bitooteessa 2018
Hogganaa kominikeeshinii Biiroo Haqaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a dabalatee namoonni dhiyeenya qabamanii hidhaman mana murtiitti hin dhiyaatiin akka jiran maatiin hidhamtootaa BBC'tti dubbatan.
Torbee sadi dura gara mana hojii isaanii osoo deemaa jiranii kan qabaman Obbo Taayyee Danda'aa, jiddugala qorannoo yakkaa 'Maa'ikalaawii' jedhamutti hidhamanii jiru.
"Sababa itti hidhameef namni itti hime hin jiru, hin qoratamnes, mana murtiittis hin dhihaanne," jechuun haati warraa isaanii aadde Sintaayyehu Alemayyehu BBC'tti himaniiru.
Biiroon Haqaa Oromiyaa kanaan dura dhimmicha akka hordofu itti himus, hanga yoona wanti isaan dhagaahan akka hin jirre, kunis haala siyaasaa amma biyyattii keessa jiruun wal qabatuu hin oolo jedhu aadde Sintaayyehu.
Gama biraan dhuma torbee darbee keessa magaalaa Baahiirdaariifi Finfinneetti kan hidhaman, namoonni siyaasaa, gaazexeessitooti, mirga namoomaaf kan falamanii fi beektoonni 30 ta'an hanga yoonaa mana murtiitti akka hin dhihaatin maatiif firoonni isaanii BBC'tti dubbataniiru.
Sanbata darbe Baahirdaar keessatti kan hidhaman namoonni 15 ol ta'an, buufata polisii itti qabamanii jiraniin kan qorataman ta'us mana murtiitti akka hin dhiyaatiin, hiriyaan isaanii Dr. Dassaaleeny jedhaman kan jalaa hidhaman barsiisaan Yuunivarsiitii Baahirdaar Obbo Indalemaaw Kindee himaniiru.
Polisiin godina itti hidhamanii qoranno kan xumure ta'us hanga ammaatti garu mana murtiitti dhihaachuus ta'e gadi dhiifamu hin dandeenye jechuun ibsu.
Manni marii ADWUI dura taa'aa paartii isaafi Ministeera Muummee biyyattii filachuuf kora irra turuunsa hidhamtoonni kun akka xiyyeeffannaa hin arganne godheera jedhani kan yaadan Obbo Indaalemmaawu, amma walgahiin kun waan xumurameef hiikamuu akka danda'an abdiin qaba jechuun BBC'tti himaniiru.
Haa ta'u malee ''itti aansee maal ta'uu akka danda'u tilmaamuun ni cima,'' kan jedhan obbo Indaalemaaw, hidhamtoota kannen guyyaa har'aa deemanii akka gaafatanii turanii fi dhiheessiin bishaan qulqulluu fi tajajilli mana fincaanii rakkoo akka itti ta'e jirus dabaluun dubbataniiru.
Hidhamtoonni kun, labsii yeroo hatattamaa amma hojiirra jiru bifa falleessuun hayyama malee walgahii gootaniittu jedhamuun hidhamuu akka hin oolle kan tilmaamama.
Obbo Indalemaaw akka jedhanitti garuu dhimma hidhamtoota kanaa qaamni ilaalu eenyu akka ta'e hin baramne.
Haaluma wal fakkaatuun Dilbata darbe alaabaa ''seeraa alaa'' qabachuu fi hayyama malee walgahii gaggeessuu sababa jedhuun Finfinnee keessatti kan hidhaman namoonni siyaasaa, gazexeessitootaafi falmitoonni mirga namoomaas hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhihaatiin himameera.
Hidhamtoota keessaa tokko kan ta'e Tamasgeen Dassaaleenyiif obboleessa kan ta'e Taariiku Dasaaleeny BBC'tti akka dubbateetti, hanga yoonaa hidhamtoota kanaarratti qorannoon godhame kan hin jiru.
Dhimmi isaanii poolisoota fi hojii raawwachiiftu labsi yeroo muddamaa gidduu naanna'aa waan jiru fakkaatas jedha.
Namooti siyaasaa dhiyeenya hidhaa bahan, hidhaatti deebi'an
26 Bitooteessa 2018